The Weekly Feature – The Art Garden Rohingya
Category: The Weekly Feature
သွေးစွန်းသော နေ့ရက်များ ရေးဖွဲ့သူ။ ။ရှဟီဒါဝင်း @ဝင်းဝင်းမော် (၁) ထာဝစဉ် စိမ်းလန်း ငြိမ်းချမ်းခဲ့တဲ့ အမေ့ရင်ခွင် အာရ်ကန်ပြည်မှာ သယံဇာတ ဝိသမ လောဘသားတစ်စုနဲ့ လက်ကိုင်တုတ်တွေက ဘာသာရေး လူမှုရေး မှိုင်းတိုက်ကာ ညီနောင်တွေကြား မြေခွေးအကြံနဲ့ စိတ်ဝမ်းကွဲစေခဲ့၊ (၂) လူလုပ် ကပ်ဆိုးဝန်းရံခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ခု ဇွန်လမှာ အပြစ်မဲ့သူတွေရဲ့ဘဝ တွေ အသက်အိုးအိမ်တွေ ရက်စက် လွန်းတဲ့ အမုန်းတရားတွေကြား သေကြေ ပျက်စီး လောင်မြိုက်ခဲ့ စာသင်ကျောင်း ဆေးခန်း ဒဿနိက အ ဆောက်အဦနဲ့ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေ ပြာကျ စေခဲ့၊ (၃) ထောင်နဲ့ချီ အပြစ်မဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကို လူမျိုးရေးအာဃာတ တွေ ရှေ့တန်းတင်ပြီး လူကြီးလူငယ်မရွေး ဖမ်းဆီးထောင်ချခဲ့ တဖက်က အပြစ်ရှိသူတွေ အောင်ပွဲခံ အပြစ်မှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရထားဆဲ သိန်းနဲ့ချီ ရိုဟင်ဂျာတွေကို အကျဉ်းသားသဖွယ် ပိတ်လှောင်ထားဆဲ၊ (၄) အေးအတူပူအမျှ ခေတ်အဆက်ဆက် ငြိမ်းချမ်းစွာ ...
Feb 05, 2022 AGR The Weekly Feature
အပတ်စဉ် ကဗျာကဏ္ဍ ဖေဖော်ဝါရီလ( ၅)ရက်၊၂၀၂၂။ အိပ်မက်ရောင်ခြည်နှင့် လူအမှုန် ယျာတင် (ရိုဟင်းသား) ပိန်းကျအမှောင် ဖြိုခွင်းအောင်ကြံ လင်းရောင်ဝတ်ရုံ လွှမ်းခြုံကာဖြင့် ဖူးထွက်ခွင့်ငှါ စိုင်းပြင်းနေသည့် အားမာန်ပြည့်ဖြိုး အနာဂတ်ကြယ် ပန်းပွင့်ပုလဲ ရို-လူငယ်များ ဥယျာဉ်လယ်မှာ လွတ်လပ်စွာ ဖူးပွင့်လင်းစေသား။ လင်းသည့်ပန်းများ ပွင့်လန်းအောင်နှင့် ပွင့်သည့်ပန်းတိုင်း လင်းဝင်းရန်ဟု ပြင်းပြဆန္ဒ နှလုံးမြဲသွင်း လူအမှုန်သည် ဥယျာဉ်ခြံသို့ တိုက်တွန်းချက်မဲ့ မပျက်ရောက်သည် တာဝန်တစ်ခု မှတ်သောကြောင့်။ ဉာဏ်ပန်းစုံလင် လင်းဝင်းရောင်ဖြင့် ထိန်ထိန်လင်းသည့် သည်ဥယျာဉ်မှာ အကယ်၍ ... ပေါင်းပင်တွေ့က ပေါင်းသင်ချင်သည် ရေငတ်ပင်ဆုံ ရေလောင်းချင်သည် လဲပင်တွေ့မူ ထူပေးချင်သည် ဤသည်က ... ပုလဲပွင့်မြတ် ရို-လူငယ်ကို လောကအလယ် မြတ်ရာဖျားဝယ် ခိုင်ခံ့မြဲမြံ ဝင်းစေချင်သော စစ်မှန်ဆန္ဒ သေးဖွဲ့တစ်ခု ကာလရှည်စွာ ကိန်းဝပ်နေသောကြောင့်။ ပညာရတနာ ရှာဖွေစုရုံး ဖြူစင်ပျိုနု လူငယ်ထုသာ ရှည်လျားမှောင်ဖုံး တို့ဘဝကို အမှောင်ခွင်း၍ အလင်းဆောင်ရာ တန်ဖိုးဖြတ်ခဲ အနာဂတ်ကြယ်ဟု ဤလူသား ဧကန်အမှန် ...
Jan 30, 2022 AGR The Weekly Feature
The Weekly Feature| 30th January 2022 MY SOUL By Dr. Yasmin Haroon My soul is wandering exhausted, My existence is questionable I wish to be no more, The moon, wind and rain excite my senses no more, About my living ...
The Weekly Feature | 23rd January 2022
Jan 23, 2022 AGR The Weekly Feature
The Weekly Feature | 23rd January 2022 The Land Of Humanity By Swe Rohingya O Bangladesh, the land of humanity. You showed the world an example of humanity. By opening your border, you savedamillion lives of my community. We ...
Jan 15, 2022 AGR The Weekly Feature
THE WEELY FEATURE The poem featuring for this week was written on 12th of June 2019 by the Rohingya poet and the latest editor of The Art Garden Rohinga, Maung Abdul Khan. Slavery In the pleasant morning, While ...